IRS ၏စာများက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြန်အမ်းငွေချေးငွေများသည်မျှော်လင့်ထားသည်ထက်ကွဲပြားခြားနားရသည့်အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြသည် - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2020B စျေးကွက်သတင်း
ဧပြီလ 11, 2021 ဧပြီလ 12, 2021 Filomena Mealy စီးပွားရေး, အသားပေးသတင်းများ, သတင်းဆောင်းပါး
IRS ကသူတို့၏ ၂၀၂၀ အကြွေးပမာဏပြောင်းလဲသွားသည်ဟုအကြောင်းကြားစာရသူအခွန်ထမ်းကထိုအသိပေးစာကိုဖတ်သင့်သည်။
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည်သူတို့၏ ၂၀၂၀ အခွန်ရှင်းတမ်းကိုတင်သွင်းခြင်းမပြုရသေးသောသူများအားသူတို့၏ ၂၀၂၀ အခွန်ပြန်အမ်းမတင်မီ ၂၀၂၀ အတွက်ရထိုက်ခွင့်ကိုမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ရန်တိုက်တွန်းသည်။
၀ င်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၂၀၀၀ (သို့) ထိုထက်နည်းသူတိုင်းသည် IRS Free File Program မှတဆင့်သူတို့၏ဖက်ဒရယ်အခွန်ရှင်းတမ်းကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်အခမဲ့ပေးပို့နိုင်သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိပြည်သူလူထုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အခွန်စည်းကြပ်မှုများကိုတင်ပြသည့်အခါအချို့က ၂၀၂၀ အခွန်ငွေကိုတောင်းခံနေကြသည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြန်ခရက်ဒစ် (RRC) ။ IRS သည် ၂၀၂၀ ချေးငွေကိုတောင်းခံပြီးသူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်ပမာဏနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခွန်ထမ်းအချို့ထံသို့စာပို့နေသည်။
ပထမနှင့်ဒုတိယစီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများပေးချေခြင်း (EIP) သည် ၂၀၂၀ ချေးငွေ၏ကြိုတင်ပေးငွေများဖြစ်ကြောင်းမှတ်မိရန်အရေးကြီးသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသူအများစုသည်ပထမနှင့်ဒုတိယငွေပေးချေမှုကိုရရှိပြီး ဖြစ်၍ သူတို့၏ ၂၀၂၀ အခွန်ပြန်အမ်းတွင်ဤအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်သင့်ပါ။
ပထမသို့မဟုတ်ဒုတိယ EIP ကိုမရရှိသူများသို့မဟုတ်ပမာဏအပြည့်ထက်နည်းသောသူများသည် 2020 RRC အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သည်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်အခွန်ရှင်းတမ်းကိုမတင်ရင်တောင် ၂၀၂၀ အခွန်ရှင်းတမ်းကိုတင်ရမယ်။
IRS သည် ၂၀၂၀ အခွန်ရှင်းတမ်းကိုအကြွေးတောင်းသည့်အခါလုပ်ငန်းလည်ပတ်သောအခါ IRS သည် ၂၀၂၀ အခွန်ရှင်းတမ်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်ယခင်ထုတ်ပေးခဲ့သည့် EIP ပမာဏပေါ် အခြေခံ၍ အခွန်ထမ်း၏အကြွေးပမာဏနှင့်ရထိုက်ခွင့်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ အခွန်ထမ်းရထိုက်ခွင့်ရှိပါက၎င်းတို့အားထုတ်ပေးပြီးသောမည်သည့် EIP ပမာဏဖြင့်မဆိုလျှော့ချလိမ့်မည်။
သုတေသနအစီရင်ခံစာကိုဝယ်ပါ။ Neurag Imaging Outsourcing Market က ၂၀၂၉ ခုနှစ်တွင် CAGR ၄.၄၀% ဖြင့် ၆.၂ ဘီလီယံဒေါ်လာခန့်ရှိသည်။
သုတေသနအစီရင်ခံစာကို ၀ ယ်ပါ။ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် CAGR ၁၆.၉% ဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၁၇၈.၂ သန်းအထိရှိမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
၀ ယ်ခြင်းသုတေသနအစီရင်ခံစာ - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကားငွေပေးချေမှုစျေးကွက်သည် ၂၀၂၉ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၈.၉၀ ဘီလီယံရှိမည်ဟုခန့်မှန်းထားပြီး CAGR ၁၆.၉% ရှိသည်။
သုတေသနအစီရင်ခံစာကိုဝယ်ပါ။ ၂၀၂၉ ခုနှစ်တွင် CAGR ၂၇.၆% ဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၂၆၄.၂ သန်းရှိမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
30 သို့မဟုတ် 1040-SR ၏လိုင်း ၃၀ တွင်ချေးငွေပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ အမှားတစ်ခုရှိပါက IRS သည်မှန်ကန်သောပမာဏကိုတွက်ချက်သည်၊ အမှားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုလိုအပ်ပါကပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းကိုအနည်းငယ်နှောင့်နှေးနိုင်သည်။ IRS သည်အခွန်ထမ်းအားမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုစာသို့မဟုတ်သတိပေးစာတစ်စောင်ပို့လိမ့်မည်။
IRS ကသူတို့၏ ၂၀၂၀ အကြွေးပမာဏပြောင်းလဲသွားသည်ဟုအကြောင်းကြားစာရသူအခွန်ထမ်းကထိုအသိပေးစာကိုဖတ်သင့်သည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်သူတို့၏ ၂၀၂၀ အခွန်ရှင်းတမ်း၊ လိုအပ်ချက်များနှင့်လုပ်ငန်းစာရွက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည် Form ကို 1040 နှင့် Form ကို 1040-SR ညွှန်ကြားချက်.
IRS မှချေးငွေအမှားပြင်ဆင်သည့်အကြောင်းပြချက်အချို့မှာ -
ထိုသူအားအခြားသူတစ် ဦး ၏ ၂၀၂၀ အခွန်ပြန်အမ်းငွေအပေါ်မှီခိုသည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။
အရည်အချင်းပြည့်မီသောကလေးသည်ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၂၀ တွင်အသက် ၁၇ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်သည်။
ချိန်ညှိထားသောစုစုပေါင်း ၀ င်ငွေနှင့် EIPs လက်ခံရရှိမှုများတွက်ချက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောသင်္ချာအမှားများ။
IRS.gov တွင်အထူးအပိုင်းရှိသည် - ၂၀၂၀ အခွန်ပြန်အမ်းငွေတင်ပြီးသည့်နောက်ပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်းခရက်ဒစ်ဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုပြင်ဆင်ခြင်း - မည်သည့်အမှားအယွင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်ကိုရှင်းပြရန်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေးသည်။ IRS တွက်ချက်မှုကိုသဘောမတူတဲ့အခွန်ထမ်းတွေကသူတို့ရဲ့စာကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ IRS ကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါသူတို့ဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့အဖြေတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည်သူတို့၏ ၂၀၂၀ အခွန်ရှင်းတမ်းကိုတင်သွင်းခြင်းမပြုရသေးသောသူများအားသူတို့၏ ၂၀၂၀ အခွန်ပြန်အမ်းမတင်မီ ၂၀၂၀ အတွက်ရထိုက်ခွင့်ကိုမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ရန်တိုက်တွန်းသည်။ မည်သည့်ချေးငွေကိုမဆိုတွက်ရန် EIPs လက်ခံရရှိသည့်ပမာဏနှင့်စတင်ပါ။ RRC သင်ထောက်ကူစာရွက်သို့မဟုတ်အခွန်ပြင်ဆင်မှုဆော့ဝဲလ်ကိုသုံးပါ။ IRS စာသို့မဟုတ်အသိပေးစာကိုမသိမ်းဆည်းမိခြင်းသို့မဟုတ်မရရှိခဲ့သည့်အခွန်ထမ်းများသည်၎င်းတို့၏တစ် ဦး ချင်းအခွန်အချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာရယူနိုင်သည် IRS အွန်လိုင်းအကောင့်.
၀ င်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၂၀၀၀ (သို့) ဒီထက်နည်းတဲ့သူတိုင်းဟာ IRS ကနေတဆင့်သူတို့ရဲ့ဖက်ဒရယ်အခွန်ရှင်းတမ်းကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်အခမဲ့ပေးပို့နိုင်သည် အခမဲ့ဖိုင် အစီအစဉ်။ သင်၏ 2020 RRC ပါ ၀ င်မည့်အခွန်ပြန်အမ်းငွေကိုအမြန်ဆုံးရရန်ဖြစ်သည် အီလက်ထရောနစ်ဖိုင် ကရှိသည် တိုက်ရိုက်အပ်နှံ သူတို့ရဲ့ဘဏ္financialာရေးအကောင့်သို့။ ဘဏ်အကောင့်များ၊ ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်ပြားများနှင့်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများစွာသည်လမ်းကြောင်းနှင့်အကောင့်နံပါတ်ကိုပေးသောအခါတိုက်ရိုက်သွင်းရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်ပြားကိုအသုံးပြုပါကကဒ်သုံးစွဲနိုင်ရန်သေချာစေရန်ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ နံပါတ်နှင့်ကဒ်နံပါတ်နှင့်ကွာခြားနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းနံပါတ်နှင့်အကောင့်နံပါတ်များကိုရယူပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် IRS.gov.RRC နှင့် မကြာခဏမေးခွန်းများကိုမေးသော် ခေါင်းစဉ်ဖြင့်။
ခေါင်းစဉ် A: သင်အခွန်ရှင်းတမ်းကိုတင်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါကပြန်လည်ဆယ်တင်ရေးခရက်ဒစ်တောင်းခံခြင်း
ခေါင်းစဉ် B: ရထိုက်ခွင့်
ခေါင်းစဉ်: D: ချေးငွေတွက်ချက်
ခေါင်းစဉ် F: ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြန်လည်ခရက်ဒစ်တွက်ချက်ရန်စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုငွေပေးချေမှုပမာဏကိုရှာဖွေခြင်း
ခေါင်းစဉ်၊ G: ၂၀၂၀ အခွန်ပြန်အမ်းငွေတင်ပြီးသည့်နောက်ပြissuesနာများကိုပြင်ဆင်ခြင်း
အများပိုင်သတင်း IRS ကို